Faahfaahin Weeraro ka dhacay Magaalada Baydhabo | Dayniile.com
Home Warkii Faahfaahin Weeraro ka dhacay Magaalada Baydhabo
Xubno katirsan Ururka Al-Shabaab ayaa xalay saqdii dhexe waxaa ay weerar madaafiic ah & mid toos ah ku qaadeen Saldhigyada Ciidamada Itoobiya & kuwa Booliska Koonfur Galbeed ee Magaalada Baydhabo, iyada oo uu jiray dagaal ka dhacay meelo kamid ah Magaalada Baydhabo.
Weerarka madaafiic ah oo jugtooda siweyn looga maqlay Magaalada Baydhabo ayaa waxaa lagu qaaday Saldhiga Ciidamada Itoobiya, waxaana la sheegay in ciidamada Itoobiya dhankooda ay madaafiic kale uga jawaabeen weerarka lagu soo qaaday.
Wararka ayaa waxaa ay intaasi ku darayaan in Al-Shabaab ay sidoo kale weerar toos ah ku qaadeen Saldhiga Ciidamada Booliska Koonfur Galbeed ku leeyihiin Suuqa Xoolaha Magaalada Baydhabo, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal la leysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan.
Goobjoogayaal ayaa waxaa ay sheegeen in ay jiraan khasaaro dhaawac ah oo dad rayid ah kasoo gaaray weeraradaas.
laamaha Amniga Magaalada Baydhabo ayaan weli ka hadlin weeraradaas, hayeeshee waxaa ay kusoo aadayaan xilli Magaalada Baydhabo ay ka socoto doorashada Xildhibaannada Golaha Shacabka
Previous articleDoorasho Maanta ka dhaceysa Magaalada Baydhabo
Next articleRaiisul Wasaare Rooble oo damacsan qorshe 28 kursi oo cusub in laga dhigo doorashadooda Muqdisho
The main ingredients in Java Burn are green tea and chlorogenic acid from green coffee beans. The product also contains L-Carnitine, which regulates blood...
Halkaan ka daawo Hodan Cali Cawaale ”Ergo habargidir ah ayuu...
Shirka waxbarashada Dalka oo Kismaayo lagu daah-furay
Militariga Itoobiya “oo galay magaalo ka tirsan gobolka Tigray”